China VIP Cooler Box orinasa sy mpamatsy | Huizhou
Ny vata fampangatsiahana VIP dia boaty mafana iray tsy mihetsika tsy misy herinaratra miaraka aminy ihany koa. Mikendry ny fandefasana fanafody izy ireo noho ny tahan'ny fitondran-tena farany ambany indrindra hisorohana ny hatsiaka na ny hafanana amin'ny famindrana. Matetika izy ireo dia ampiasaina miaraka amin'ny fonosana gilasy sy biriky. .
Vata mangatsiatsiaka kokoa an'ny VIP (Vacuum Insulation Panel)
1.Ny boaty mangatsiaka VIP dia boaty mafana iray voaroaka tsy misy herinaratra miaraka aminy ihany koa. Lasibatr'izy ireo amin'ny fandefasana fanafody noho ny tahan'ny fitondran-tena farany ambany indrindra hisorohana ny hatsiaka na ny hafanana amin'ny famindrana. Matetika izy ireo dia ampiasaina miaraka amin'ny fonosana gilasy sy biriky.
2.Vacuum insulation board (VIP board) dia iray amin'ireo fitaovana insulation vacuum, dia misy ireo akora famenoana fototra sy ny layer an'ny fiarovana ny banga, azony atao tsara ny misoroka ny famindrana hafanana ateraky ny fivanginan'ny rivotra, ka ny fitarihana hafanana dia mety ho lehibe nihena, hatramin'ny 0,002-0,004W / mk, 1/10 ny fitarihana hafanan'ny fitaovana fanamafisam-peo nentin-drazana. Ary ny akora famenoana fototra dia misy alimo silika fitaratra sy gazy, ny conductivity hafanana teo aloha dia 0,0015w / mk, ary ny 0.0046w / mk farany
3. Matetika ny boaty mangatsiatsiaka VIP dia misy ampahany telo (anatiny, afovoany sy ivelany) mba hiarovana anao tanteraka ny vokatrao. Ary ny ampahany lehibe dia ny sosona mafana afovoany izay ahafahantsika manolotra safidy roa, izany hoe VIP sy VIP miampy PU. Safidy fitaovana amin'ny antsipiriany azafady mba jereo ny latabatra masontsivana.
4. Amin'ireto endri-javatra VIP tena tsara ireto, ny boaty mangatsiatsiaka VIP dia be pitsiny ary novolavolaina tamim-pitandremana mba hahazoana vokatra azo avy amin'ny fanafody fandefasana entana, mazàna ilaina ny fanaraha-maso ny mari-pana.
5. Ary efa vonona ny vahaolana voamarina momba ny fanondroan'ny mpanjifa.
1.VIP boaty mangatsiaka kokoa dia tsy manome coolness, noho izany ny fitaovana fanaovana boaty dia tena zava-dehibe. Ho an'ny fitantanana hafanana tena ambany dia ambany, ny boaty mangatsiatsiaka VIP dia ampiasaina amin'ny vokatra voafehy tsara, toy ny fitaterana farmasia.
2. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny vokatra hafa avo lenta sy marefo satria avo lenta ny vidiny.
1.Ny conductivity mafana ambany indrindra miaraka amin'ny fahombiazan'ny insolution tsara indrindra amin'izao fotoana izao
2.Fifehezana mari-pana mialoha
Tontonana boaty 2.Thinner hamonjy toerana, kely kokoa, maivana kokoa, mora kokoa noho ny boaty nentim-paharazana.
3.Ny boaty dia vita amin'ny teknolojia mamolavola vatana iray manontolo, ahafahan'ny boaty matanjaka sy mateza kokoa.
4. Ny hatsiaka lava kokoa maharitra hatramin'ny 72h, 96h, 120h
5.Ny vokadiny insulation tsara dia tsara, boaty mangatsiaka VIP dia safidy tsara indrindra ho an'ny fandefasana farmasia.
1.Mba mitandrema tsara amin'ny fisafidianana ny vahaolana mety amin'ny fandefasana fanafody manokana.
2.Vahaolana voafantina dia tokony hamarinina alohan'ny tena fampiasana
3.Ny boaty mangatsiaka kokoa dia afaka mandeha tsara amin'ny biriky ranomandry na fonosan'ny ranomandry mitondra hatsiaka araka ny filàn'ny mari-pana.
Teo aloha: Vata misy baoritra fisorohana
Manaraka: EPP Cooler Box